တွင်း၊ နံရံများပြိုကျခြင်း၊ ရေတံခွန်များတံတားများ - အမ်စတာဒမ်ဟာပြိုလဲနေပါတယ်။
href=> ဟောက်သံ "ဒါဟာအဆောက်အ ဦး ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပြိုကျသကဲ့သို့" ဟုသူမကဆိုသည်။
ကြီးမားသောတွင်းနက်ကြီးတစ်ခုပေါ်လာပြီး၎င်းဘေးတွင်ရှေးဟောင်းမီးခွက်တိုင်ပြိုလဲသွားသည်။ ဒီနေ့ဖြစ်ခဲ့ရင်တစ်ယောက်ယောက်ကအလွယ်တကူလဲကျနိုင်တယ်” ဟုသူကပြောသည်။ အဲဒီအချိန်မှာ Mrs Pinksterboer ကစတင်ပူပန်လာသည်သူမနေထိုင်သော ၁၇ ရာစုတူးမြောင်းအိမ်အတွက်။ အမ်စတာဒမ်၏ရှေးအကျဆုံးရပ်ကွက်ဖြစ်သော Groenburgwal ရှိသူ၏ခရိုင်၏တူးမြောင်းများကိုဖြတ်သန်းသွားသောရှေးခေတ်အုတ်များနှင့်အင်္ဂတေနံရံများပေါ်တွင်ရပ်တည်နေသည်မှာသေချာသည်။ အန္တရာယ်သည်ပုံကြီးချဲ့မထားပေ။ ၁၇ နှင့် ၁၈ ရာစုများမှပါ ၀ င်သောအဆောက်အ ဦး များဖြင့်တန်းစီထားသည့်တူးမြောင်းများဖြင့်အမ်စတာဒမ်သည်အဓိက
ခရီးသွား destination ည့်နေရာ
Ilvy Njiokiktjien အတွက် Hfrance.fr
Sinks နောက်ကျောလမ်းများနှင့်တံတား ၁,၇၀၀ ၏ထက်ဝက်နီးပါးသည်အလွန်တရာမှခဲယဉ်းပြီးပြုပြင်ရန်လိုအပ်နေသည်၊ မကြာခဏလမ်းကြမ်းများကိုခရုမြန်နှုန်းဖြင့်ဖြတ်ကျော်ရန်အတင်းအကျပ်ပြုလုပ်သည်။ အားဖြည့်ရန်ကျယ်ပြန့်စီမံကိန်းကိုနေစဉ်တူးမြောင်းနံရံများစတင်ချိန်တွင်မြို့သည်အလွန်ကြီးမားသောဆောက်လုပ်ရေးနေရာနှင့်တူလာသည်။
အခြေခံပြproblemနာမှာနံရံများ၏အနေအထားဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အနက်ကီလိုမီတာ ၂၀၀ ခန့်သည်ယိုယွင်းနေသောကြောင့်တူးမြောင်းများသို့ပြိုကျသွားနိုင်သည်။ အဆောက်အအုံများနှင့်လူများနှင့်ဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အလားအလာရှိသည်။
ပျက်ကျခဲ့ပြီးရွယ်ပိုက်များကိုချိတ်ဆွဲထားခြင်းနှင့်ငါးမှရေထဲသို့ခုန်ထွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ထိုအချိန်တွင်မည်သူမျှလမ်းလျှောက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ တူးမြောင်းများကိုအဆက်မပြတ်သယ်ဆောင်နေသည့်ခရီးသွား bo ည့်လှေများထဲမှတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံများကဲ့သို့ပင်အမ်စတာဒမ်သည်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက်တွင်ရှိသည်။ ၁၇ ရာစုတွင်အကြီးအကျယ်ကျယ်ပြန့်လာခဲ့ပြီးမြို့သည်အုတ်မြစ်များအဖြစ်အသုံးပြုသောသန်းနှင့်ချီသောသစ်သားတိုင်များပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ ဆည်ပေါ်ရှိတော်ဝင်နန်းတော် ဥပမာအားဖြင့်၎င်းတို့အနက် ၁၃,၆၅၉ ခုရှိသည်။ လက်တွေ့ကျကျအရာအားလုံးအမ်စတာဒမ်အလယ်ပိုင်းတွင်ဤတံတားများဖြင့်ထောက်ပံထားသည်။ Image
သံမဏိတိုင်များသည်အမ်စတာဒမ်တွင်ပုံမှန်နေရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ထိုနေရာတွင်အနည်းဆုံး ၁၂၅ မိုင်တူးမြောင်းနံရံများပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။
Hfrance.fr အတွက် Ilvy Njiokiktjien
“ အဲဒီအချိန်တုန်းကဘိလပ်မြေကုန်တင်ကားကြီး ၄၀ နဲ့အခြားလေးလံသောပစ္စည်းကိရိယာများမဟုတ်ဘဲမြင်းများနှင့်ကားများတင်ဆောင်ရန်သူတို့ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်” ဟုအဲလ်ဘတ်ကပြောကြားခဲ့သည်။ ကြီးမားတဲ့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းဖြစ်။ မျက်မှောက်ခေတ်ဘဝသည်မြို့တော်ကိုပြောင်းလဲလိုက်သည်နှင့်အမျှအိမ်များသည်ဘိလပ်မြေနှင့်ကွန်ကရစ်များဖြင့်ခိုင်ခံ့ခဲ့ကြသော်လည်းလမ်းများနှင့်တူးမြောင်းနံရံများကိုမူလျစ်လျူရှုခဲ့သည်။
သစ်သားလိပ်ခေါင်းများသည်ဖိအားအောက်သို့ရွေ့လျားခြင်း၊ အက်ကွဲခြင်းသို့မဟုတ်ပြိုကျခြင်း၊ တံတားများနှင့်ဘေးထွက်နံရံများတူးမြောင်း၏နှစ်ဖက်။
အစောပိုင်းရာစုနှစ်များကရာစုနှစ် ၁၇ ရာစုရှိတူးမြောင်းကွင်းများကိုဖြတ်သန်းသွားလာနေသောလမ်းကြောင်းအားလုံးသည် Rembrandt သည်သူ၏စတူဒီယိုသို့သွားသောအခါရေသည်စိမ့်ဝင်သွားသည်၊ မော်တာကိုသန့်ရှင်းစေသည်။ နှင့်စပင်နိုဇာသည်ဘာသာရေးကိုဆွေးနွေးနေသည်။ SUVs သည်တူးမြောင်းများအနားတွင်ရပ်နားသည်၊ အမှိုက်သရိုက်ကုန်တင်ကားများသည်အမှိုက်များကိုစုဆောင်းသောလှေများကိုရွေ့လျားစေသည်။ ကူးစက်ရောဂါမဖြစ်ပွားမီကလှေတစီးသည်တူးမြောင်းများကို ဖြတ်၍ လှိုင်းများဖြင့်လှိမ့်ထွက်သွားကာလှောင်ပြောင်မှုများကိုအမြစ်တွယ်နေသောကြောင့်ပန်ကာလှိုင်းလေထန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
တစ်ခုခုလုပ်ရန်လိုသည်။ မစ္စတာဒီဗရီစ်က“ အကယ်လို့ဒီလိုသာဆက်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါတို့ဟာသဘာဝဘေးဒဏ်ကိုချက်ချင်းရောက်သွားလိမ့်မယ်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Kloveniersburgwal ။
ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအနည်းဆုံးနှစ် (၂၀) ​​ကြာပြီးယူရို (၂) ဘီလီယံ၊ ဒေါ်လာ (၂.၅) ဘီလီယံကုန်ကျမည်ဖြစ်ပြီးကျွမ်းကျင်သူများကတွက်ချက်သည်။ "ဒီအရေအတွက်ကများတယ်။ အလုပ်အရမ်းများတဲ့လူ ဦး ရေထူထပ်တဲ့နေရာမှာလုပ်ရမယ်။
တံတား ၁၅ ခုသည်လက်ရှိပြုပြင်နေဆဲဖြစ်သည်။ အချို့သည်
တံတားနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောတူးမြောင်းနံရံများပြိုလဲခြင်းကိုတားဆီးရန်ကြိုးစားနေသည်။ တံတားကိုသုံးသောလျှပ်စစ်နှင့်အင်တာနက်ကေဘယ်လ်များ၊ တယ်လီဖုန်းလိုင်းများနှင့်အခြားဝန်ဆောင်မှုများကွန်ယက်ကိုဖြန့်ကျက်နေစဉ်။
မြောက်ပင်လယ် Bullebak PRINSENGRACHT NASSAUKADE ဗဟို
WEESPERSTRAAT Grachtengordel Amstel R. တက္ကသိုလ်
PRINSENGRACHT NASSAUKADE ဗဟိုလူတန်းစား ဘူတာ အမ်စတာဒမ် နယ်သာလန် တော်ဝင်နန်းတော်
1/2 mile Hfrance.fr မှ By "C 'ဟာအလွန်ရှုပ်ထွေးတဲ့ကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများပြုလုပ်နေသည့်ဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်တာ Dave Kaandorp ကပြောကြားခဲ့သည်။ တူးမြောင်းများရုတ်တရက်၎င်းတို့ကို "ရေပေါ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအများကြီးသယ်ဆောင်လာတာနဲ့အမျှ" ရုတ်တရက်အသုံးပြုလာတာကြောင့်သူကအားသာချက်တစ်ခုကိုသူမြင်ခဲ့သည်။ Image Dave Kaandorp, အဆောက်အ ဦး တစ်ခု ကန်ထရိုက်တာ, အထိမ်းအမှတ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်ယခုပိတ်ထားသော Bullebak တံတားဖြစ်သည်။
href="http://www.phrance.jpgသို့သော်များစွာသောသူတို့သည်အလုပ်အားလုံး၏အားနည်းချက်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။မြို့၏လှပသောတူးမြောင်းများတလျှောက်တွင်တူးမြောင်းနံရံများအပေါ်ဖိအားပေးမှုကိုသက်သာစေရန်သမိုင်းဝင်သစ်ပင်များခုတ်လှဲခဲ့သည်။သံမဏိစာရွက်လိပ်ခေါင်းထောက်ခံမှုနံရံများပြိုလဲလုနီးပါးအန္တရာယ်နှင့်ကြုံတွေ့နေရသည်။ရေငုပ်သောအဝေးထိန်းထိန်းချုပ်ထားသောရေအောက်ကင်မရာများရှိရေငုပ်သမားနှင့်ပညာရှင်များသည်အဆိုးရွားဆုံးအက်ကြောင်းများကိုရှာဖွေကြသည်။“ဒီစည်ပင်သာယာမှုဟာဒီထက်မြန်မြန်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ဓာတ်ပုံဆရာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုအဓိကထားသည်။သူသည်အမ်စတာဒမ်ရှိအိမ်လှေ၂၅၀၀အနက်မှတစ်ခန်းတွင်နေထိုင်သည်။“အဲဒီအစားသူတို့ဟာပိုက်ဆံအားလုံးကိုမက်ထရိုလိုင်းအသစ်မှာကုန်ကုန်ကြတယ်။”၁၁ကီလိုမီတာခန့်ရှည်လျားသောNorth-Southလမ်းကြောင်းသည်ယူရို၃ဘီလီယံကျော်ကုန်ကျပြီးတည်ဆောက်ရန်၁၅နှစ်ကြာခဲ့သည်။Mr.ဗန်Lohuizenနှင့်Waalseilandsgrachtတလျှောက်ရှိအခြားလှေပိုင်ရှင်၂၄ဦးသည်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာတွန့်ဆုတ်ထားသည့်နေရာများမှယာယီနေရာပြောင်းရွှေ့ရန်လိုအပ်ကြောင်းမကြာမီကအကြောင်းကြားခဲ့ပြီးတူးမြောင်းနံရံများသို့ပြန်လည်ပြုပြင်မှုများပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။“အချို့သောလှေများကိုတူးမြောင်းအလယ်တွင်ယာယီနေရာချမည်။တခြားသူတွေအတွက်တော့သူတို့တွေရဲ့လှေတွေဟာနံရံပံ့ပိုးမှုစနစ်တွေတပ်ဆင်ပြီးနောက်မှာမသင့်တော်တော့တာဖြစ်နိုင်တယ်”ဟုသူကပြောသည်။“ဒါဟာကြီးမားတဲ့ရှုပ်ထွေးမှုပါပဲ။အခုသူတို့တစ်နှစ်ကိုနှစ်ကီလိုမီတာကိုတည်ဆောက်ပြီးကီလိုမီတာ၂၀၀ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့လိုနေပြီ။၎င်းသည်ရာစုနှစ်တစ်ခုကြာနိုင်သည်။" Image Kadir van Lohuizen နှင့်အခြားလှေပိုင်ရှင်များသည်နံရံများကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ရန်အတွက်ဆယ်စုနှစ်များစွာချီတက်ခဲ့သည့်နေရာများကိုခေတ္တစွန့်ခွာရမည်။ တူးမြောင်း၏ href=> ခရက်ဒစ် ... Ilvy Njiokiktjien အတွက် Hfrance.fr
alderman, M De Vries , အနှစ်များတွင်အမ်စတာဒမ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်မကြာမီလာမယ့်သည်သူ၏ပုံမှန်ပို့စကတ်နှင့်ကွဲပြားခြားနားပါလိမ့်မယ်။ သို့တိုင်သူသည်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအားလာရောက်လည်ပတ်ရန်စိတ်မပျက်သင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ “ လူတိုင်းကိုလာပြီးငါတို့လုပ်နေတာတွေကိုကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ “ ဒီလိုလှပတဲ့မြို့ဟာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုတယ်ဆိုတာ visitors ည့်သည်တွေသိစေချင်တယ်။ " မစ္စ Pinksterboer သည်လက်ဝတ်ရတနာဒီဇိုင်နာသည်တွင်းပေါက်အနီးရှိပိတ်ထားသောတံတားဘေးတွင်ရပ်နေသည်။ သေးငယ်သောအနီရောင်ပြားများကိုတံတား၏အောက်ခြေနှင့်တူးမြောင်းနံရံများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ သူတို့ကလေဆာရောင်ခြည်တိုးလာရင်လေဆာရောင်ခြည်နဲ့တိုင်းတာတယ်။ အမ်စတာဒမ်၊ မြို့ကြီးကြီး ၎င်းသည်လှံတံများပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည်။ အကယ်၍ မြို့ပြိုလဲခဲ့လျှင် ဒီအတွက်ဘယ်သူ့ကိုပိုက်ဆံပေးရမလဲ။ "ငါတို့ထင်ပါတယ်" ဟုမစ္စစ် Pinksterboer ကပြောသည်။
2021-07-28 05:55:57 | ဥရောပ
ယူနက်စကိုသည်အင်္ဂါနေ့တွင်ရိုမေးနီးယားအနောက်ပိုင်း Rosia Montana ၏ရောမရွှေတွင်းဟောင်းကိုကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်စာရင်းသို့ထည့်သွင်းခဲ့ပြီးမြို့အားအသက်သွေးကြောအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးရက်ရှည်တူးဖော်ရေးစီမံကိန်းကိုပိုမိုရှုပ်ထွေးစေခဲ့သည်။...
တောမီးကြောင့်စပိန်ကိုပျက်စီးစေပြီး Sardinia တွင်မကြုံစဖူးသောဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်
2021-07-28 00:43:20 | ဥရောပ
အကြီးအကျယ်ပျက်စီးနေသောတောမီးများသည်ဥရောပတောင်ပိုင်းရှိဒေသများသို့ပျံ့နှံ့သွားပြီးစပိန်နှင့်ဂရိကျေးလက်ဒေသများကိုဖြိုခွဲပြီးလူပေါင်း ၁၀၀၀ ခန့်ကိုအီတလီဆာဒီနီယာကျွန်းပေါ်မှနေအိမ်များမှထွက်ခွာစေခဲ့သည်။...
ဂျာမန်စက်မှုဥယျာဉ်တွင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားရာတစ် ဦး သေဆုံးပြီး ၄ ဦး ပျောက်ဆုံးနေသည်
2021-07-27 23:52:25 | ဥရောပ
အင်္ဂါနေ့ကဂျာမန်စက်မှုဥယျာဉ်တွင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်လူတစ် ဦး သေဆုံးပြီးအခြားလေး ဦး ပျောက်ဆုံးနေသည်။...
ဂျာမန်အာမခံကုမ္ပဏီမှမုန်တိုင်းနှင့်ဆိုင်သောတောင်းဆိုမှုများအတွက်ဒေါ်လာ ၆.၅ ဘီလီယံအထိခန့်မှန်းထားသည်
2021-07-27 23:26:53 | ဥရောပ
ဂျာမနီအာမခံစက်မှုလုပ်ငန်းအသင်း GDV မှယခုလအတွင်းနိုင်ငံ၏နေရာအနှံ့အပြားတွင်အကြီးအကျယ်ရေလွှမ်းမိုးမှုများဖြစ်ပွားခဲ့သည့်မုန်တိုင်းများမှတောင်းဆိုမှုများတွင်ယူရို ၅. ၅ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၆. ၅ ဘီလီယံ) အထိရှိလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။...
2021-07-27 23:09:03 | ဥရောပ
အင်္ဂါနေ့ကအိုင်ယာလန်ပါလီမန်ပြင်ပတွင်အဖြူရောင်ဆန္ဒပြမှုတွင် ၀ တ်ဆင်ထားသောသတို့သမီးလောင်းများကိုဝတ်ဆင်ကာအခြားသူများကမူ COVID-19 ကန့်သတ်ချက်များကိုဝေဖန်သောအားဖြင့်ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများကိုရေလွှမ်းမိုးကာအစိုးရအားမင်္ဂလာဆောင် guests ည့်သည်များအပေါ်ကန့်သတ်ချက်များကိုဖြေလျှော့ပေးခဲ့သည်။...
2021-07-27 19:22:08 | ဥရောပ
ပြင်သစ်အစိုးရ ၀ န်ကြီးမှ ၀ န်ကြီးအား ၀ န်ကြီးချုပ်အား ၀ တ္ထုတိုဖြင့်ရိုက်သည်
2021-07-27 19:12:23 | ဥရောပ
အင်္ဂါနေ့တွင်ပြင်သစ်အစိုးရ ၀ န်ကြီးနှစ် ဦး သည် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကိုမိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်နမူနာဖြင့်တိုးမြှင့်ခဲ့ပြီးတစ်ခုမှာအခြားကာကွယ်ဆေးအားအခြားကာကွယ်ဆေးကိုထိုးပေးခဲ့သည်။...
ယူကရိန်းသမ္မတအငြင်းပွားမှုများကို ကိုးကား၍ လက်နက်ကိုင်အကြီးအကဲအားရာထူးမှဖယ်ရှား
2021-07-27 19:03:22 | ဥရောပ
ယူကရိန်းသမ္မတ Volodymyr Zelenskiy သည်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦး စီးချုပ်အားရာထူးမှဖယ်ရှားလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။...
2021-07-27 06:17:06 | ဥရောပ
Eu ဒီဂျစ်တယ် covid ကဒ်များသည်အကျိုးသက်ရောက်သည်
2021-07-27 02:05:23 | ဥရောပ
ဥရောပသမဂ္ဂ၏အကြီးမားဆုံးလေကြောင်းလိုင်းများမှတာဝန်ရှိသူတ ဦး ကမူ“ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကစနစ်တကျအကောင်အထည်ဖော်မှသာခရီးသည်တွေအတွက်အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။...
Cardinal စတင်သင့်သော 10 ၏သမိုင်းဝင်ဗာတီကန်လိမ်လည်မှုရုံးတင်စစ်ဆေး
2021-07-26 15:36:44 | ဥရောပ
Cardinal အပါအ ၀ င်လူ ၁၀ ယောက်ကိုထူးခြားတဲ့လိမ်လည်မှုကိုဗာတီကန်မှာအင်္ဂါနေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရာရှိတွေဟာဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာယုံကြည်ကိုးစားရမယ့်အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။...
2021-07-26 14:48:25 | ဥရောပ
ဇူလိုင်လတွင်ထောက်ပံ့မှုကွင်းဆက်စိုးရိမ်မှုများနှင့် coronavirus ကူးစက်မှုများမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်ဂျာမန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိတ်ဓာတ်ကျသွားသည်။...
2021-07-26 14:40:20 | ဥရောပ
စပိန်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်း၏ဇူလိုင်လလယ်တွင်အပူရှိန်ကြောင့်လန်းဆန်းစေသောလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုသည်ပုဂ္ဂလိကရေကူးကန်တစ်ခုပိုင်ဆိုင်ရန်သို့မဟုတ် COVID-19 ကူးစက်ခံရသည့်အများပြည်သူရေကန်များတွင်အန္တရာယ်မရှိတော့ကြောင်း Aura Cenet မှရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။...
2021-07-26 08:33:23 | ဥရောပ
ပြင်သစ်ပါလီမန်ကမူ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအားကျန်းမာရေးလုပ်သားများအတွက်မဖြစ်မနေလုပ်ရန်နှင့်လူမှုရေးနေရာများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်သောဥပဒေမူကြမ်းကိုအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။...
2021-07-26 07:34:41 | ဥရောပ
ဥရောပသမဂ္ဂအနေဖြင့်ကျွန်း၏အစိတ်အပိုင်းများကိုမျောပါစေသောမီးလောင်ကျွမ်းမှုကိုကူညီရန်အီတလီ၏တောင်းဆိုချက်ကြောင့်သစ်တောမီးသတ်လေယာဉ် ၄ စီးကို Sardinia သို့ပေးပို့ခဲ့ပြီးရာပေါင်းများစွာသောလူများကိုကယ်ဆယ်ခဲ့ရသည်။...